बोलेरै नेपाली टाइप कसरी गर्ने ? - निर्माण खबर
के तपाईंलाई हातले नेपाली टाइप गर्न कठिन लाग्छ ? कम्प्युटरमा नेपाली भाषामा धेरै नै टाइप गर्नुपर्नेछ तर तपाइँलाई खासै आउँदैन ? नेपाली भाषामै च्याट गर्ने रहर नेपाली टाइप नजानेकै कारण पूरा गर्न सक्नुभएको छैन ? जसोतसो रोमनमा लेखेर नेपाली टाइपको विकल्प प्रयोग गरिरहनुभएको छ कि ?
यदि त्यसो हो भने पनि तपाइँले खासै चिन्ता लिनुपर्ने छैन । वास्तवमा प्रविधिको विकासले गर्दा अब तपाइँले हातले टाइप गर्नुपर्ने झण्झट सकिएको छ । बस्, तपाईं बोल्नुस्, मोबाइल वा कम्प्युटरले आफैं फटाफट टाइप गरिदिन्छ, त्यो पनि नेपालीमै …
Previous articleअझै कायम छ दोहोरो कर, छाता ऐन ल्याउन सुझाव
Next articleकलाकारिताको एउटै पुरस्कारबाट काठमाडौँमा घर !